Dowladda Pakistan oo soo saartay nidaam cusub oo Soomaalida ku heli karaan Fiisaha – Somali Top News
Ra’isul-wasaaraha dalka Pakistan, Imraan Khaan waxa uu dhawaan shaaciyey inay wax ka bedeleen habka ay Dhoofayaasha ku heli jireen Fiisaha lagu soo galo dalkiisa, wuxuuna xusay inay Dhoofayaasha Ajaaniibta fiisaha lagu soo siin doono marka ay ka soo degaan Garoomadda Diyaaradaha ee Pakistan.
Ra’isul-wasaare Imraan Khaan waxa uu hadalkaasi ka sheegay Munaasabad uu ku furayey qaabka qaadashadda Fiisaha Online-ka oo lagu qabtay caasimadda dalkaasi ee Islamabaad.
Waxa uu tilmaamay in dadyowga ka soo jeeda 175 waddan fiisaha lagu siin doono marka ay ka soo degaan Garoomadda, iyadoo Liiska dalalkaasi laga reebay dalalka Somalia iyo Hindiya.
Ra’isul-wasaaraha dalka Pakistan, Imraan Khaan waxa u uku micneeyey go’aanka ay Dhoofayaasha ku siinayaan Fisiaha Online-ka waxa uu ku micneeyey iyadoo xaalladda ammaanka dalkiisa wanaagsan tahay, isla markaan ay jiraan Fursado lagu maalgashan karo iyo kuwo Dalxiis.
Dhinaca kale, mar sii horreysay, ilo ku dhow Wasaaradda Arrimaha Gudaha Pakistan waxaa lagu sheegay in Liiska B ee Fiiso-siinta aad loo dhimay, iyadoo dalka Bangaladesh laga saaray Liiskaasi, balse dadyowga ka soo kala jeeda dalalka Somalia iyo Hindiya ayaa ku haray Liiskaasi, taasi oo micnaheedu yahay in Muwaadiniinta labadaasi waddan inaysan ka mid ahayn Dhoofayaasha Fiisaha Online ku heli kara marka ay doonayaan inay booqdaan dalka Pakistan.
Si kastaba ha ahaatee, ma cadda sababaha ay Dowladda Pakistan ugu dartay dadka Soomaalida Liiska dadyowga aan Fiisaha Online-ka la siin Karin, xitaa marka ay Garoomadda dalkaasi ka degaan iyo inay Somalia barbar dhigto Hindiya oo ay colaad gaamurtay kala dhexeyso Pakistan.
← Somaliland oo ganacsateeda ka dooratay shirkadda DP World ee Berbera maamusha
Qaar kamid howlwadeenada Hirshabelle oo tababar loogu furay magaalada Jowhar →
Fahad Yaasiin oo ka qeyb galay kulan looga hadlay amniga Muqdisho
Qaramada Midoobay oo dib u bilowday mushaarka ciidamada Kenya ee Soomaaliya ka howlgala